सन्देशले परिणाम ल्याउँछ
सोमवार, जुन 20, 2011 बुधबार, अक्टोबर 16, 2013 जेन लिसाक गोल्डिंग
जब हामी मार्केटिंग गरिरहेका छौं, धेरै पटक, हामी परिणामहरूको बारेमा सोच्दछौं। म यी धेरै सम्भावनाहरू रूपान्तरण गर्न चाहन्छु, हामी प्रोडक्ट एक्स को बारे मा सचेत हुन चाहन्छौं, म यी धेरै रीट्वीट / सेयरहरू आदि चाहान्छु। मलाई गलत नपार्नुहोस्, यी कुरा ट्र्याक गर्न निश्चित रूपमा महत्त्वपूर्ण छ कि यदि हाम्रो मार्केटिंग थाहा छ भने। सन्देश काम गर्दैछ। यद्यपि, मैले फेला पारे कि जब मेरो मार्केटिंग सन्देशहरूमा म खास उद्देश्य पाउँदिन, मसँग धेरै भन्दा बढी सment्लग्नता वा नतीजाहरू हुन्छन्।
यसको बारेमा सोच्नुहोस्: के तपाईंले "तपाइँको ब्ल्गलाई कसरी अनुकूलित गर्ने १० चरणहरू" भन्दा बढी रेन्ट वा रायमा आधारित ब्लग जस्तो पोष्ट गर्नुभयो? त्यो पोष्टमा प्रतिक्रिया / सment्लग्नता स्तर के थियो? म शर्त लगाउन तयार छु कि यो मेटा ट्यागहरू सम्मिलित गर्ने बारेमा मानक "मान-थप" पोष्ट भन्दा अलि बढी थियो।
अर्को पटक तपाइँसँग केहि भन्नु छ जुन मान - थप भन्दा अधिक रायमा आधारित हुन सक्छ, लेख्नुहोस्। आफ्नो राय दिनुहोस्। यदि व्यक्ति सहमत छैन भने, तपाईं अझै पनि अर्थपूर्ण कुराकानी सुरु गर्न सक्नुहुन्छ जुन मानिसहरूले रमाइलो र साझा गर्नेछन्।
टैग: विश्लेषणEntourage २००।WordPress
ट्विटर मा जवाफ र तिनीहरूले खरीद गर्नेछ
वेब र सामाजिक एनालिटिक्स को इतिहास